Baahida Baahsan ee Loo qabo Daawaynta Haramaha Dariska Bariga • Dawooyinka Inc.eu
Baahida loo qabo xashiishadda dawada ayaa saddex jibaar ka noqotay Jarmalka. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah in xeerarka la dabciyay sanadihii la soo dhaafay. Bukaanka qaba xanuun daba dheeraada ama cudurada muruqyada sida sclerosis badan ayaa takhtarkooda u qoray xashiishad daawo ah labadii sano ee la soo dhaafay
1 Isticmaalka caadiga ah
2 Tuunniga cuntada cannabis-ku jirta
3 Beeridda geedaha dibadda
Go'aankan ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka wuxuu ahaa mid ka dhex muuqday nidaamka daryeelka caafimaadka Jarmalka. Waxay ku sii kordhisay bukaanno badan oo doonaya inay isku dayaan daaweynta xashiishka. Si kastaba ha noqotee, beerashada xashiishka ee deriskeena bariga ayaa ka dambeysa baahida weyn ee loo qabo cagaaran cagaaran. Shirkadaha shisheeye ee xashiishka waxay u arkaan fursad ay ku ganacsadaan.
Dalabka cannabis, CBDsaliida iyo waxyaabaha la xiriira ayaa qarxay sanadihii la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, cilmi-baaris yar ayaa lagu sameeyay saameynta ay ku leedahay cabashooyinka caafimaad ee kala duwan. Tani waa sida Ururka Dhakhaatiirta Jarmalku u sharxaan una xoojiyaan. Hase yeeshe bukaanno badan ayaa si wanaagsan ula kulma daaweynta xashiishka. Tusaale ahaan lalabbo iyo matag ka dib daaweynta kiimoterabiga, oo leh dabac iyo Gilles de la Tourette. Sheekooyinka guusha ee bukaanada adduunka oo dhan hadda way badan yihiin. Jarmalka dhexdiisa, dad aad u tiro badan ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya daaweynta xashiishka.
Tuunniga cuntada cannabis-ku jirta
Baahida loo qabo xayawaanka daawada cannabis ayaa sanadkiiba mar kordhay, sida ay muujineyso tirooyinka ururka ABDA. Sida laga soo xigtay tirooyinka, cuntada ku jirta 95.000-cannabis-ku jirta ayaa la iibiyay sannadkii hore. 2017, tan iyo markii la sii daayay bishii Maarso, kuwani waxay ahaayeen cuntooyinka 27.000. Intaa waxaa dheer, ku dhowaad baakad 53.000 leh daawooyinka loo yaqaan 'cannabis-dose' ee la diyaariyay ayaa la soo saaray sannadkii hore.
Beeridda geedaha dibadda
Kobacaan qarxa wuxuu ka dhigay Jarmalka mid ku tiirsan beeraleyda xashiishada shisheeye. 'Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte' ayaa u ogolaatay shirkadaha inay soo saaraan 10,4 tan oo xashiish daawo ah. Taasi way ka cadahay sidii markii hore loo qorsheeyay (6,6 tan). Laakiin diidmada xeerarka ayaa dib u dhigaysa dhaqan gelinteeda. Goynta ugu horreysa waxaa la filayaa dhammaadka sannadka 2020. Dhoofiyeyaasha Holland iyo Kanadiyaanka ayaa ka faa'iideysta suuqa Jarmalka.
Soo saaraha Dhirta Tilray wuxuu doonayaa inuu ubaxyo xashiish ah u sameeyo dhammaan farmasiyada Jarmalka si dhakhso leh. Iyada oo suurtagal ah boqolaal kun oo bukaanno ah, waddamo badan iyo shirkado ayaa u arka ganacsi wanaagsan. Israel, iyo kuwa kale, waxay hadda leeyihiin iftiinka cagaaran ee dhoofinta xashiishadda caafimaadka, oo ay ku jirto Jarmalka. Baadhitaano badan ayaa lagu samaynayaa saamaynta THC iyo CBD.
Akhri wax dheeraad ah vegetablesnew.nl (Xigasho)
cannabisDuitslandcaafimaad lehcaafimaadkadaawada cawskabeerista cannabis
ALMELO - Kobcinta laba dhir oo hemp sidoo kale waa mamnuuc. Xitaa haddii taasi loogu talagalay daawada ...
Ma aaminbaa in baabuur la wado CBD? Saynisyahanada ayaa ka walaacsan 1 waxyeelo.
Dunida CBD way sii kordheysaa. Hadda waxaa laga helaa dhammaan noocyada wax soo saarka gaarka ah sida gummies, ...